Izimbangela zangempela zomdlavuza zivele zembulwe - i-Afrikhepri Fondation
NgoMsombuluko, Septhemba 21, 2020
Izimbangela zangempela zomdlavuza ekugcineni zembulwe
Lth Nobel laureate, UDkt Otto Warburg H, wanikela ngokuphila kwakhe esifundweni nakwimbangela ye umdlavuza. UDkt Warburg wayengumqondisi weKaiser Wilhelm Institute (manje eyiMass Planck Institute) yesayensi yokuzivocavoca umzimba eBerlin.
U-Otto Heinrich Warburg, owazalwa ngo-8 October 1883 eFréiburg im Breisgau (eBaden-Württemberg), wafa eBerlin, wayengumdokotela waseJalimane, isazi sezinto eziphilayo kanye nesazi semvelo. Udokotela weKhemistry noMdokotela Wezokwelapha, wayeyindlalifa umklomelo kaNobel i-physiology kanye imithi ngokuthola kwakhe izinqubo ezibalulekile zokuphefumula kwamaselula nezinhlelo ezihlukile ze-enzymatic. Sekubonise ukuthi amangqamuzana omdlavuza ashintsha umzimba wawo ekusetshenzisweni kwemithi ebizwa ngokuthi i-anaerobic metabolism Waziqinisa, engaqinisekanga, ukuthi le umdlavuza ayikwazi hhayi esikhule endaweni ecebile oksijini. Phakathi kwabafundi bakhe, odumile kakhulu UHans Adolf Krebs, Nobel Prize futhi ku-1953.
UDkt Warburg wayengomunye wabaholi abaphambili bokuzivocavoca bekhulu lama-20, futhi wathola ukuthi imbangela yomdlavuza i-acidity kakhulu emzimbeni, okusho ukuthi i-pH emzimbeni ingaphansi kwezinga elijwayelekile lika-7,365, okuyisimo se-asidi. UWarburg wafunda i-tumor metabolism kanye nokuphefumula kwamaseli futhi bathola ukuthi amangqamuzana omdlavuza ayaqhubeka futhi achuma ku-pH ephansi, ku-6, ngenxa yokukhiqizwa kwe-lactic acid kanye ne-CO2 ephezulu. Wayekholelwa ngokuqinile ukuthi kunobudlelwano obuqondile phakathi kwe-pH ne-oxygen. I-pH ephakeme, okuyi-alkaline, isho ukuthi kunamamolekyuli e-oksijini amaningi, kanti i-pH ephansi, okuyi-acid, kusho ukuthi kune-oxygen oxygen ephansi. . Ngu-oxygen lona ofanayo odingekayo ukugcina amaseli enempilo.
Ku-1931, wanikezwa umklomelo weNobel ku-Physiology noma ngoMuthi ngenxa yalokhu kutholakala okubalulekile ngenxa yesifo somdlavuza. Uthe: izicubu ezinomdlavuza ziyi-acidic, kanti izicubu ezinempilo ziyi-alkaline. Amanzi ahlukanisa i-H + ne-OH-ions, uma ngabe kukhona i-H + ethe xaxa, iyi-acidic. Uma kunokweqile kwe-OH- khona-ke kuyi-alkali.
Encwadini yakhe ethi The Metabolism of Tumors, ukuvezile ukuthi zonke izinhlobo zomdlavuza zibonakaliswa yizimo ezimbili eziyisisekelo: i-acidosis ne-hypoxia. Ukuntuleka kwe-oksijini ne-acidosis kuyizinhlangothi ezimbili zohlamvu lwemali olufanayo: uma unalo, unolunye. Onke amaseli ajwayelekile anesidingo esiphelele somoya-mpilo, kepha amangqamuzana omdlavuza angaphila ngaphandle kwe-oxygen, lokhu kungumthetho ngaphandle kokuhluka. Ukhipha iseli lama-35% komoya-mpilo wayo amahora angama-48, lingaba nomdlavuza.
UDkt Warburg ukhombisile ngokusobala ukuthi imbangela eyinhloko yomdlavuza ukuntuleka komoya-mpilo. okudala isimo se-asidi emzimbeni womuntu. UDkt Warburg uthole ukuthi amangqamuzana omdlavuza yi-anaerobic futhi awakwazi ukuhlala lapho kukhona amazinga aphezulu we-oxygen, atholakala esifundeni se-alkaline. Qondisisa i-pH, ukuthi yini ebangela umdlavuza nokuthi kungani unomdlavuza noma okunye ukugula.
Ngokuya ngocwaningo lukaDkt Enderlein, ukwelashwa okuphelele kwezifo ezingapheliyo, kungenzeka kuphela lapho igazi libuyiselwa pH evamile, kancane alkaline.
Imbangela yomdlavuza: Kungani i-pH kufanele isithinte?
Njengoba senziwe emanzini angama-60-70%, izinga le-pH linemiphumela emibi kakhulu kumakhemikhali womzimba, ezempilo nasezifo. Zonke izindlela zokulawula (ukuphefumula, ukujikeleza, ukugaya, ukukhiqiza ama-hormone) zenzelwe ukulinganisela i-pH, ukukhipha umzimba nezicubu zezinsalela ze-asidi ngaphandle kokulimaza amaseli aphilayo. Uma i-pH iphambuka, i-acidic kakhulu noma i-alkali kakhulu, amangqamuzana azifaka ngokwawo emfucumfucwini enobuthi futhi afe. Njengomvula we-acid ehlathini kanye nemfucumfucu echibini echibini, i-pH engalinganiseli iveza izicubu zomuntu, idle izinkulungwane zamakhilomitha zemithambo nemithambo yemithambo yemikhiqizo, njengoba imikhiqizo ewonakalisayo ihlasela imabula. Uma ingalawulwa, i-pH engalinganiseli ingaphazamisa imisebenzi nemisebenzi yamaselula, njengokushaya kwenhliziyo kanye nezinhlansi phakathi kwama-neurons ebuchosheni.
Imbangela yomdlavuza ixhumene nezinto ezi-2 ezihlala zikhona ngesikhathi somdlavuza, i-acid pH kanye nokuntuleka komoya-mpilo
Ngokufunda ukusebenzisa lezi zinto ezimbili okucatshangwa ukuthi zibangela umdlavuza, umuntu anganciphisa noma abuyisele inqubo yomdlavuza. Khumbula ukuthi i-pH iyisibalo esibonakalayo se-10. Ngakho-ke umehluko omncane ku-pH uhumusha umehluko omkhulu enombolweni ye-OH-ions. Ngamanye amagama, igazi eline-pH ka-7.45 liqukethe i-oksijini eningi kune-64.9% kunegazi ngakho-ke i-pH ingu-7.3. Umdlavuza udinga indawo enempilo ye-acid / oksijini ukuze uphile futhi ukhule. Iziguli ezinomdlavuza obulalayo cishe ziyi-acidic ephindwe izikhathi eziyinkulungwane kunokuba kufanele. Lokhu kusho isigaba esibucayi se-oksijini ezingeni lamaselula. Lapho kungekho umoya-mpilo, ushukela ushukela bese kuba i-lactic acid. Lokhu kwehlisa i-pH yamaseli. I-pH yomchamo kanye namathe ezigulini ezinomdlavuza ezigula kakhulu kuvame kakhulu phakathi kwe-4.0 ne-5.5. Lapho umdlavuza uphenduka metastases, i-pH ihlehla njalo. Imizimba yethu ayikwazi ukulwa isifo uma i-pH ingalingani kahle. Ngamanye amagama, i-alkali noma iyafa.
I-Anticancer (uhlelo olusha): Ukushukuma kwansuku zonke kwempilo yomzimba nengqondo (Izimpendulo)
1 okusha kusuka ku-6,99 €
kusukela ngoSepthemba 21, 2020 10:35
Usuku lokukhulula 2014-10-23T00:00:00.000Z
Inombolo yamakhasi isihlangane 388
Usuku lokushicilela 2014-10-23T00:00:00.000Z
Bukela icala laseRoma J (2017)